Nyochaa emechara maka akara niile nke Mahadum Minnesota nyefere Site na Linux
Nyochaa emechara maka akara niile nke Mahadum Minnesota nyefere
Ndi oru nke Linux Foundation wepụtara n'oge na-adịbeghị anya akụkọ agbakọtara na ihe ahụ merenụ metụtara ndị nchọpụta site na Mahadum Minnesota nke ghọrọ ezigbo ihe mkparị, ebe ọ bụ na ha nwara iwebata ihe nkedo na kernel nke nwere njehie ezoro ezo nke na-eduga na enweghị ike.
Ndị mmepe kern ahụ gosipụtara ozi ebipụtara na mbụ, n’ime 5 patches kwadebere na usoro nke ‘Hypocrite Commits’ nchọpụta, 4 patches na ọma ama tụfuo ozugbo na ụzọ nke ndị na-elekọta ahụ ma banyeghị kernel repository.
Ọzọkwa, Nyochaa nkwenye 435, gụnyere ndozi nke ndị mmepe sitere na Mahadum nke Minnesota nyefere ma ghara ị metụta nnwale iji kwalite adịghị ike zoro ezo.
Onwa nke 20, 2021, nyere echiche na otu nke ndị nyocha na Mahadum nke Minnesota (UMN) maliteghachiri mbupu koodu na-emebi Linux kernel.
Greg Kroah-Hartman gwara ndi obodo ka ha kwusi inabata UMN ma bido nyocha ohuru nke ntinye akwukwo ndi anabatara na mahadum.
Akụkọ a na-achịkọta ihe ndị dugara n'oge a, nyocha naakwụkwọ "Hypocrite Commits" nke etinyere maka mbipụta, yana Nyochaa kernel niile gara aga na-eme site n'aka ndị edemede UMN na anabatala n’ime ebe nchekwa anyị. Mechie ụfọdụ ntụnye maka otu obodo, gụnyere UMN, ga-esi na-agagharị
gaa n'ihu. Ndị nyere aka na akwụkwọ a gụnyere ndị òtù Linux
Nka na Nduzi Nka na ụzụ (TAB) nke Ntọala ahụ, site na enyemaka nke nyocha nke patch
ọtụtụ ndị ọzọ so na Linux kernel Mmepụta obodo.
Nke ahụ bụ na kemgbe 2018, otu ndị na-eme nchọpụta si Mahadum nke Minnesota nọ na-arụsi ọrụ ike n'ịdozi njehie. Nyocha ohuru ahụ egosighi omume ọjọọ ọ bụla na mmemme ndị a, mana ọ kpughere ụfọdụ njehie na adịghị mma n'amaghị ama.
Ọzọkwa Ekwuputara nkwenye 349 dika nke ziri ezi na agbanweghi agbanwe. N'ime 39 arụ, nsogbu chọrọ mmezi achọtara; akagbuola mmekorita a ma dochie ya site na idozi ihe kariri tupu kernel 5.13 weputara.
Njehie ndị dị na 25 emeela ka edozi na mgbanwe ndị na-esote ma 12 mebie mkpa ha, ebe ọ bụ na ha metụtara usoro ihe nketa nke ewepụrụrịrị na kernel. Otu n'ime ndị ziri ezi kagbuo na arịrịọ nke na-ede akwụkwọ. E zigara nkwenye ziri ezi 9 na adreesị umn.edu ogologo oge tupu e guzobe otu ndị nyocha nyocha.
Iji nwetaghachi obi ike na otu Mahadum nke Minnesota ma nwetakwa ohere isonye na mmepe kernel, Linux Foundation atụpụtala ọtụtụ ihe achọrọ, nke imirikiti n'ime ha enwetala.
N'ihi ịdị uchu na-achọ nyocha iji chọpụta ndị dere ya na oru nyocha di iche iche nke UMN, mata ebumnuche nke obula ịmachi ma wepu ihe n’adighi nma n’agbanyeghi uche. Nke a na-achọ ịmaliteghachi lNtụkwasị obi nke ndị obodo n'otu ndị nyocha dịkwa mkpa, ebe ọ bụ na ọIhe omume a nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na ntụkwasị obi na ha abụọ adreesị nke nwere ike ịme ka onye ọ bụla na-eme nchọpụta sonye na kernel na na-emepe emepe.
Dịka ọmụmaatụ, ndị nyocha ahụ ewepụla mbipụta nke "Hypocrite Commits" ma kagbuo okwu ha na IEEE Symposium, na mgbakwunye na ịkọwapụta n'ihu ọha usoro ihe omume na ịnye nkọwa nke mgbanwe ndị edobere n'oge ọmụmụ ahụ.
Anyi aghaghi icheta nke ahu Greg Kroah-Hartman, onye na-ahụ maka ijigide alaka ụlọ ọrụ nke Linux kernel hụrụ ihe omume ahụ wee were mkpebi ịjụ mgbanwe ọ bụla site na Mahadum Minnesota na kernel Linux, ma weghachite ihe nkwado niile anabatara na mbụ.
Ihe kpatara mgbochi ahụ bụ ọrụ nke otu ndị otu nyocha nke ahụ na-amụ banyere ohere nke ịkwalite adịghị ike zoro ezo na koodu nke ọrụ mmeghe, ebe ọ bụ na otu a ezigala patch nke gụnyere njehie nke ụdị dị iche iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Nyochaa emechara maka akara niile nke Mahadum Minnesota nyefere
Bauh: Onye njikwa ngwugwu eserese maka otutu ngwa Linux